Jesus Fellowship Multilingual Bible: Nepali New Revised Version, Ezekiel 17
Nepali New Revised Version, Ezekiel 17
2 “हे मानिसको छोरो, एउटा उखान भन्‌, इस्राएलका घरानालाई एउटा दृष्‍टान्‍त दे।
3 तिनीहरूलाई भन्‌, ‘परमप्रभु परमेश्‍वर यसो भन्‍नुहुन्‍छ: शक्तिशाली पखेटा र लामा-लामा रङ्गबिरङ्गका प्‍वाँखहरू भएको एउटा ठूलो गरुड लेबनानमा आयो, अनि देवदारुको टुप्‍पो त्‍यसले चुँड़ायो।
4 त्‍यसले त्‍यो टुप्‍पो व्‍यापारीको एउटा देशमा लग्‍यो, र पैकारीहरूको एउटा सहरमा त्‍यो रोप्‍यो।
5 “ ‘त्‍यसपछि त्‍यसले तिमीहरूका देशको केही बीउ लगेर मलिलो जमिनमा रोप्‍यो। त्‍यसले बैँसको बोटजस्‍तै प्रशस्‍त पानी भएको ठाउँमा त्‍यो रोप्‍यो,
6 र त्‍यो उम्रेर होचो फैलिने लता भयो, र त्‍यसका हाँगाहरू त्‍यस गरुडतिर फर्किए तर त्‍यसका जराहरूचाहिँ आफूमुनि नै रहे। यसरी त्‍यो एउटा लता भयो अनि त्‍यसका हाँगाहरू उम्रन थाले र त्‍यसबाट धेरै पातहरू निस्‍कन लागे।
7 “ ‘तर शक्तिशाली पखेटा र पूरै प्‍वाखले भरिएको अर्को एउटा ठूलो गरुड थियो। अब त्‍यस लताले आफ्‍ना जराहरू आफू रोपिएको ठाउँबाट पठाउन र पानी पाउनलाई आफ्‍ना हाँगाहरू पनि त्‍यस गरुडतिर फैलाउन लाग्‍यो।
8 त्‍यसमा हाँगाहरू लागून्‌, फलहरू फलून्‌ र एउटा असल लता त्‍यो होस्‌ भनेर त्‍यो प्रशस्‍त पानी भएको एउटा राम्रो जमिनमा लगाइएको थियो’।
9 “तिनीहरूलाई भन्‌, ‘परमप्रभु परमेश्‍वर यसो भन्‍नुहुन्‍छ: के त्‍यो सप्रला त? के त्‍यो जरैसमेत उखेलिँदैन र त्‍यसका फलहरू टिपिँदैनन्‌, र त्‍यो ओइलनेछैन र? त्‍यसका सबै नयाँ पालुवाहरू ओइलाइहाल्‍नेछन्‌। त्‍यसलाई जरैसमेत उखेल्‍नलाई खूब बलियो हात अथवा धेरै मानिसहरू चाहिनेछैन्‌।
10 त्‍यसलाई सार्‍यो भने पनि के त्‍यो सप्रन्‍छ र? पूर्वीय बतासले हानेपछि के त्‍यो जम्‍मै सुकिहाल्‍दैन र– त्‍यो उम्रेकै ठाउँमा सुकिहाल्‍दैन र?”
11 तब परमप्रभुको यो वचन मकहाँ आयो:
12 “यस बागी घरानालाई भन्‌, ‘के तिमीहरू यी कुराको अर्थ के हो, सो जान्‍दैनौ?’ तिनीहरूलाई भन्‌: बेबिलोनको राजा यरूशलेममा गयो, र त्‍यसका राजा र भारदारहरूलाई आफूसँग बेबिलोनमा ल्‍यायो।
13 तब त्‍यसले राजाको वंशमध्‍येको एक जनालाई लिएर त्‍यसलाई शपथ खान लगाएर त्‍यससँग सन्‍धि गर्‍यो। अनि देशका प्रमुख मानिसहरूलाई त्‍यसले लग्‍यो,
14 ताकि त्‍यो राज्‍य निर्बल रहोस्‌ र फेरि खड़ा हुन नसकोस्‌, र त्‍यसको सन्‍धिको वचन पालन गरेर मात्र त्‍यो रहन सकोस्‌।
15 तर मिश्रदेशले त्‍यसलाई घोड़ाहरू र एउटा ठूलो सेना दिओस्‌ भनेर त्‍यसले मिश्रदेशमा राजदूतहरू पठाएर बेबिलोनका राजाको विरुद्धमा त्‍यो राजा बागी भयो। के त्‍यो सफल हुनेछ र? के यस्‍तो काम गर्ने मानिस उम्‍कन सक्‍छ र? करार भङ्ग गरेपछि पनि के त्‍यो उम्‍कन सक्‍छ र?
16 “ ‘जस्‍तो म जीवित छु, परमप्रभु परमेश्‍वर भन्‍नुहुन्‍छ, त्‍यो बेबिलोनमा मर्नेछ, त्‍यसलाई सिंहासनमा बसाल्‍ने जुन राजाको शपथ त्‍यसले तुच्‍छ ठान्‍यो र जससँग गरेको सन्‍धि त्‍यसले भङ्ग गर्‍यो, त्‍यही राजाको मुलुकमा अर्थात्‌ बेबिलोनमा मर्नेछ।
17 फारोको शक्तिशाली सेना र ठूलो दलले लड़ाइँमा त्‍यसलाई सहायता गर्न सक्‍नेछैन, जब धेरै मानिसहरूलाई नाश गर्न भनी ठूला-ठूला घेरा-मचान तयार गरिन्‍छन्‌ र घेरा हाल्‍नलाई पर्खालहरू बनाइन्‍छन्‌।
18 त्‍यसले करार भङ्ग गरेर शपथलाई तुच्‍छ ठान्‍यो। आफ्‍नो हात धितो राखेर पनि त्‍यसले यस्‍ता-यस्‍ता काम गरेको कारणले, त्‍यो उम्‍कनेछैन।
19 “ ‘यसैकारण परमप्रभु परमेश्‍वर यसो भन्‍नुहुन्‍छ, जस्‍तो म जीवित छु, त्‍यसले तुच्‍छ ठानेको मेरो शपथ र त्‍यसले भङ्ग गरेको मेरो करार म त्‍यसकै शिरमा खन्‍याइदिनेछु।
20 म मेरो जाल त्‍यसमाथि फिँजाउनेछु र त्‍यो मेरो पासोमा पर्नेछ। म त्‍यसलाई बेबिलोनमा ल्‍याउनेछु, र त्‍यो मप्रति अविश्‍वासी भएको कारणले म त्‍यसको न्‍याय गर्नेछु।
21 त्‍यसका भागेर गएका सबै सेना तरवारले मारिनेछन्‌, र बाँचेकाहरूचाहिँ चारैतिर तितरबितर हुनेछन्‌। तब तैंले जान्‍नेछस्‌, कि म परमप्रभुले नै यो कुरा भनेको हुँ।
22 “ ‘परमप्रभु परमेश्‍वर यसो भन्‍नुहुन्‍छ: एउटा देवदारुको सबैभन्‍दा टुप्‍पाको एउटा सानो मुना चुँड़ाएर लिनेछु, र एउटा अल्‍गो र उच्‍च पर्वतमा म त्‍यो रोप्‍नेछु।
23 इस्राएलका पहाड़का टाकुराहरूमा म त्‍यो रोप्‍नेछु। त्‍यसका हाँगाहरू हुनेछन्‌ र त्‍यसले फलहरू फलाउनेछ, र त्‍यो एउटा सुन्‍दर देवदारुको रूख हुनेछ। सबै किसिमका चराहरूले त्‍यसमा गुँड़ लाउनेछन्‌, र त्‍यसको छायामा तिनीहरू बस्‍नेछन्‌।
24 वनका सबै रूखहरूले यो कुरा जान्‍नेछन्‌, कि अग्‍लो रूखलाई होचो बनाउने, र होचो रूखलाई अल्‍गो बनाउने, हरियो रूखलाई सुकाइदिने र सुकेको रूखलाई हरियोभरियो बनाउने म परमप्रभु नै हुँ। “ ‘म परमप्रभुले नै भनेको हुँ, र म त्‍यो गर्ने नै छु’।”
Ezekiel 16 Choose Book & Chapter Ezekiel 18